घुँयत्राे : प्रधानमन्त्रीज्यू त ७७ सालभरी एकदिन मात्रै कार्यालय पुग्नु भो, बाँकी ३६४ दिन बालुवाटाराटै प्रचण्ड र माधवको धज्जि उडाएर बस्नु भो भन्ने हल्ला छ त कुरो के हो ? – Yug Aahwan Daily
घुँयत्राे : प्रधानमन्त्रीज्यू त ७७ सालभरी एकदिन मात्रै कार्यालय पुग्नु भो, बाँकी ३६४ दिन बालुवाटाराटै प्रचण्ड र माधवको धज्जि उडाएर बस्नु भो भन्ने हल्ला छ त कुरो के हो ?
युग संवाददाता । १३ बैशाख २०७८, सोमबार १३:०० मा प्रकाशित
हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू त ७७ सालभरी एकदिन मात्रै कार्यालय पुग्नु भो । बाँकी ३६४ दिन बालुवाटाराटै प्रचण्ड र माधवको धज्जि उडाएर बस्नु भो भन्ने हल्ला छ त कुरो के हो ? दुई दुइटा किड्नी फेर्दा त हाम्रा प्रधानमन्त्री त्यति तगडा छन् । यदी किड्नी नै नफे¥याभा झन् कस्ता हुँदा हुन् ?
ओलीबाको हर्कत देखेर ऐले सबै यस्तै कुरा गर्दै छन् त । हुन पनि जम्मा एक बर्षको अवधियाँ प्रधानमन्त्री नै एक पटक मात्रै कार्यालय पुगेर काम गर्छन् भने त्यो देशका कर्मचारीतन्त्र कसरी चल्या होला ? के कर्मचारीले देशाँ राम्रै काम गद्र्या होलान् त ?
कर्मचारीले गतिलो काम गर्दिने भए देशाँ विकास निर्माण किन हुन्न र ? विकास बजेट किन खर्च हुन्न त ? जब देशको प्रधानमन्त्री नै यति लापरबाही छन् भने उनका कर्मचारी जिम्मेवार बन्ने त कुरै भएन नी । त्यसैले त देशाँ भष्टाचारले सिमा नाघ्या छ । तर प्रधानमन्त्री चाँही देशाँ भष्टाचारै भाछैन भनेर भष्टाचारीलाई काखि च्यापेर बस्याछन् ।
दुईतिहाइको आडमा ओलीको सरकारले जस्तो किसिमको बर्रबर्रता पार्टीमा र सरकाराँ मच्चा छन् र नियम कानून संविधान सबैको खिल्लि उडाएर कमिनिष्ट सरकारको बदनाम गराछन् । यसले विश्वमा कमिनिष्ट शासन कस्तो हुन्छ र कसरी चल्या हुन्छ भनेर छर्लङ्गै देख्खिया छ ।
कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर भन्याभैmँ देश कोरोनाले आक्रान्त छ । विरामी अक्सिजन नपाएर मर्ने अवस्थाँ छन् । सरकारले पैसा नदेर अस्तालमा उत्पादन गरिने ग्याँस उत्पादन छैन । खोप काँट ल्याउने र जनतालाई खोपदिने त्यतातिर मतलव छैन ।
तर प्रधानमन्त्री चाँही आफ्नै पार्टीका सांसदलाई कारबाही गरेर पदमुक्त गरेछि आफ्नो पदाँ घुन पुत्लो लाग्दैन भनेर दौडिराछन् । प्रधानमन्त्रीमा सवार भाको यो भूत नमन्सिएसम्म सायद जनताले ग्याँसको त कुरै छोडौँ, एउटा सिटामोलसमेत नपाउने अवस्था आउन सक्छ । सरकार चलाउने नै ठिक नभएछि तिन्का सल्लाहकार कसरी गतिला हुन् ? अब त अरु दुईबर्ष चुप्प लाएर बस्नेबाहेक उपाए छैन । धन्य हो कमिनिष्टको सरकार !